खोज खबर : कहाँ छ, बागलुङ बजारमा शहरबाटो ? – ebaglung.com
खोज खबर : कहाँ छ, बागलुङ बजारमा शहरबाटो ?
२०७६ जेष्ठ १५, बुधबार ०५:१७	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ २०७६ जेठ १५ । समयको अन्तराल सँगै बागलुुङ बजारको ‘शहर बाटो’ धेरैको मानस पटलबाट हराई सकेको छ । प्रशंगवस बागलुङको शहरबाटोका सम्वन्धमा कुरा चल्दा धेरै कमलाई मात्र शहरबाटोका बारेमा यथेष्ट जानकारी भएको पाईन्छ ।
२०१५ सालका खिचिएको बागलुङ चौरको खेत, जस्लाई अहिले बागलुङ बजार भनिन्छ ।
हाल बागलुङ लालीगुराँश चोक देखी केहि मिटर तल जस्लाई दोबाटो भनिन्थ्यो त्यहाँ सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ मिलनका पिताले बनाएको घर अद्यपि देख्न सकिन्छ । घरको सामुन्ने टिमिलाको रुख थियो, जुन केहि वर्ष पहिले ढलेको हो । त्यस घर देखी सिधा अगाडी हालको लाली गुराँश होटेलको आडैबाट हालको धौलागिरी अन्चल (बागलुङ)अस्पताल मरेपिपल निस्कने बाटो नै तत्कालीन बागलुङको ‘शहर बाटो’ हो ।
२०२२ साल तिर अमेरिकी पिसकोर भोलिन्टियर डेभिड कार्लसनले खिचेको तस्वीरमा राजा महेन्द्र सवारी भएको बाटो (माथी) र त्यसदेखी तल अस्पताल निस्कने शहरबाटो देख्न सकिन्छ ।
श्री ५ महेन्द्र २०१६ साल मंसिर महिनामा देश भ्रमणका क्रममा बागलुङ जिल्ला सदरमकाम सवारी हुँदा मरेपिपल देखी हालको लालीगुराँश चोक सम्मको नयाँ खनिएको बाटो कायम राख्ने भन्ने हुुकुम प्रमांगी भएपछी ‘शहर बाटो’ आझेलमा परेको हो । २०१६ साल पछी विभिन्न पर्वहरुमा आयोजना गरिने जुलुस प्रदर्शनहरुले यहि नयाँ बाटोको प्रयोग हुन थालेको हो । सर्व प्रथम यस बाटो (सडक)मा मुलपानीका पिंगलराज पन्तले खरको छाप्रो बनाएका हुन् ।
तस्वीर सौजन्य: हरिप्रसाद श्रेष्ठ, बागलुङ ।
यहाँ सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ मिलन र प्रदीप शेरचनका पक्की घरहरु बाहेक अन्य घरहरु थिएनन् वा नगन्य थिए । राजा महेन्द्र सवारी भएको बाटो कायम भएपछी सोहि बाटोमा भवनहरु निर्माण हुन थाले र त्यस देखी करिब १० मिटर तलको शहर बाटो बेबारिसे बन्दै गयो । अहिले ६० वर्षपछी आएर कहाँ छ, बागलुङको शहर बाटो भनेर सोधखोज गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
यस चौरको खेतमा लटरम्म धानका बाला झुल्थे । हेरौँ एक जना पिसकोर भोलिन्टियर डेभिड कार्लसनले २०२२ साल तिर खिचेको बागलुङ चौरको खेतमा धान रोपाईं र धान फलेको दृश्य ।
तस्वीरमा देखिए जस्तै पहिले २०१६ साल अगाडी र त्यसको केहि वर्ष पछाडी सम्म यसलाई बागलुङ चौरको खेत भनेर पुकारिन्थ्यो ।
२०३४ सालको बागलुङ बजार ।
६ दशक पहिले सम्मको शहर बाटो (ठुलो बाटो) अहिले आएर डहरमा परिणत भएको छ । बागलुङ नगरपालिका लगायतका सरोकारवाला निकायहरुको विशेष चासो नदिईरहेको अवस्थामा शहर बाटो नराम्ररी निचारिदै छ । बेला बखत शहरबाटो सरसफाई गर्ने काम स्थानीयहरु गर्दै आएका छन् । बाटो सानो र साँघुरो भएपनि सरसफाई र उचित व्यवस्थापन गर्न सके शहरबाटो राम्र देखिने रहेछ भन्न यहाँ प्रस्तुत तस्वीरले बताउछ ।
शहर बाटोको सरसफाई ।
बिद्युत प्राधिरणले तारको गुजिल्टो महिनौँ देखी शहरबाटोमा फ्याँकिदिएपछी शहरबाटो डहर बन्ने चिन्ता ।
अस्पताल तिरको शहरबाटोको नाका अतिक्रमण गरेर घरहरु निर्माण गर्नाले दुईजना मानिसहरु एकसाथ हिड्न सक्ने अवस्था छैन । शहरबाटोको मुहान भन्दा बीचको भाग केहि चौडा रहेको देखिन्छ , जस्को सरसफाई कार्य भैरहेको छ । सरोकारवाला निकायले शहरबाटोको ऐतिहासिकतालाई मध्यनजर गरी यसलाई अतिक्रमण हुन बाट बचाउन तत्कालै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ , ताकि बागलुङको शहरबाटो भन्दा साथ सबैको ध्यानाकर्षण हुन सकोस ।
पर्वतका व्रेन ट्युमर पीडित पौडेललाई प्रवासी युवाहरुले गरे ८५ हजार वढी आर्थिक सहयोग !
नेपालमा भएका कम्युनिष्ट धारका पार्टी कहिल्यै लोकतान्त्रिक हुँदैनन – काँग्रेस नेता भण्डारी